အမေရိကန်ငွေဖောင်းပွမှု & လက်လီအရောင်း ဒေတာ
ဖေဖော်ဝါရီ ၈ရက် ၁၅:၃၀ MTအချိန်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေကြေးတန်ဖိုးအတွက် အရေးပါသည့် ဒေတာ ၄ခုကို အမေရိကန်စာရင်းအင်းဋ္ဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်. စားသုံးသူ အညွှန်းကိန်း ၂မျိုးဖြစ်သည့်: CPI နှင့် core CPI (အစားအသောက်နှင့် စွမ်းအင်မပါ)ကို ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး အတိုးနှုန်းတင်ရာတွင်အရေးပါသည့် ထိုထုတ်ပြန်ချက်ကို ဗဟိုဘဏ်မှ သတိထားနားစွင့်နေပါသည်.
လက်လီအရောင်းဒေတာကိုလည်း ၂မျိုးထုတ်ပြန်ပေးမည်ဖြစ်သည်. ပုံမှန်လက်လီအရောင်းဒေတာနှင့် (မော်တော်ကားများထုတ်ကုန်မပါသည့်) core လက်လီအရောင်းဒေတာဟူ၍ထုတ်ပြန်ပေးမည်ဖြစ်သည်. ထိုဒေတာများသည် အမေရိကန်ပြည်သူများ၏ စီးပွားရေးအဆင့်အတန်းကို သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်.
အမှန်တကယ်ထွက်လာတဲ့ အချက်အလက်တွေက ခန့်မှန်းထားတာထက်ပိုကောင်းနေရင် ဒေါ်လာက တန်ဖိုးမြင့်တတ်လာမှာပါ. သို့သော်ထည်း တစ်ချိန်တည်း တပြိုင်တည်းထုတ်ပြန်မည့် အခြားဒေတာများကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်. ထိုဒေတာများ အလွန်မကောင်းပါက တက်သင့်သလောက်မတက်နိုင်ပါ.